KỌMPUTA ANAGHỊ AHỤ KỌMPUTA NA NETWỌK - WINDOWS - 2019
Ihe mere kọmputa anaghị ahụ kọmputa na netwọk
A na-ewere console console Xbox 360 dị ka ngwaahịa Microsoft kachasị mma n'ọgba egwuregwu, n'adịghị ka ọgbọ na ọgbọ na-esote. Ogologo oge gara aga, e nwere ụzọ iji malite na egwuregwu site na ikpo okwu a na kọmputa nkeonwe, ma taa anyị chọrọ ịgwa ya.
Ntugharị nkasi obi nke ezinụlọ Xbox abụwo ọrụ siri ike, n'agbanyeghị na ejikarị IBM PC karịa otu consoles Sony ahụ. Ruo ugbu a, enwere otu usoro ihe omume nwere ike ịme egwuregwu na Xbox nke ọgbọ gara aga - Xenia, mmalite nke malitere site na onye ịnụ ọkụ n'obi si Japan, onye ọ bụla na-aga n'ihu.
Nzọụkwụ 1: Nyochaa usoro chọrọ
N'ikwu okwu n'ụzọ doro anya, Zenia abụghị emulator zuru ezu - kama nke ahụ, ọ bụ onye nsụgharị nke na-ahapụ gị ka ị gbaa ọsọ na ngwanrọ nke ederede na Xbox 360 na Windows. N'ihi ọdịdị ya, ngwọta a enweghị ntọala zuru ezu ma ọ bụ nkwụnye nkwụnye, ya mere i nweghị ike ịhazi njikwa na-enweghị egwuregwupad dị oké mkpa.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe a chọrọ bụ:
Kọmputa nwere ihe nhazi nke na-akwado ntụziaka AVX (Osimiri Sandy ọgbọ na n'elu);
GPU na Vulkan ma ọ bụ DirectX 12 nkwado;
Windows 8 na ọhụrụ 64-bit bit.
Nkeji 2: Nbudata nkesa
Enwere ike ibudata ihe nkesa emulator site na ntanetị ọrụ na njikọ na-esonụ:
Xenia Download Page
Enwere njikọ abụọ na ibe - "nna ukwu (Vulkan)" ma "d3d12 (D3D12)". Site na aha ọ na-edozi na nke mbụ bụ maka GPU na nkwado Vulkan, nke abụọ bụ maka kaadị X nke enyere ya aka 12.
Ugbu a, a na-eleba anya na mbipute mbụ, ya mere, anyị nwere ike ikwu na ị na-ebudata ya, na-ekele, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kaadị vidiyo ọ bụla na-akwado ụdị API. Otú ọ dị, egwuregwu ụfọdụ na-arụ ọrụ nke ọma na DirectX 12 - ị nwere ike ịchọta nkọwa dị na ndepụta ndenye ọrụ.
Ndekọ nkwekọrịta Xenia
Nkeji 3: Na-agba ọsọ na Games
N'ihi njirimara ya, usoro ihe omume ahụ enwere enweghị ntọala bara uru nye onye ọrụ njedebe - niile dị maka atụmatụ maka ndị mmepe, onye ọrụ nkịtị agaghị enweta uru ọ bụla site n'aka ha. Egwuregwu egwuregwu ahụ dị nnọọ mfe.
Jikọọ gamepad arụmọrụ gị na kọmputa gị. Jiri ntuziaka njikọ ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu.
Gụkwuo: Ezi njikọ nke gamepad na kọmputa
Na windo emulator, jiri ihe menu "Njikwa" - "Meghee".
Ga-emeghe "Explorer"nke ịchọrọ ịhọrọ ma ọ bụ ihe oyiyi nke egwuregwu na usoro ISO, ma ọ bụ chọta ndekọ na-enweghị ike ma họrọ faịlụ mmemme Xbox na mgbatị XEX na ya.
Ugbu a, ọ na-anọgide na-echere - egwuregwu ahụ kwesịrị ibu ọrụ na ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na usoro ahụ, gaa na mpaghara sochirinụ nke isiokwu a.
Emulator anaghị amalite na faịlụ exe
N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a pụtara na ikike ngwanrọ nke kọmputa adịghị ezu iji mee ihe omume ahụ. Lelee ma ọ bụrụ na ihe nhazi gị na-akwado ntụziaka AVX, na maadị ndịna-emeputa na-akwado Vulkan ma ọ bụ DirectX 12 (dabere na ngbanwe ahụ eji).
Na mbido, njehie api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll na-egosi
Na ọnọdụ a, emulator enweghị ihe ọ bụla iji mee ya - enweghi ọbá akwụkwọ dị ike na kọmputa. Jiri ntuziaka n'isiokwu na-esonụ maka nchọpụta nsogbu.
Ihe Ọmụmụ: Idozi njehie na faịlụ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
Mgbe ịmalite egwuregwu, ozi "Enweghi ike ịdakwasị STFS akpa" pụtara
Ozi a na-egosi mgbe ihe oyiyi ma ọ bụ ihe egwuregwu na-emebi. Gbalịa ibudata onye ọzọ ma ọ bụ weghachite otu.
Egwuregwu ahụ malitere, ma e nwere ụdị nsogbu niile (na-eserese, ụda, nchịkwa)
Na-arụ ọrụ ọ bụla emulator, ịkwesịrị ịghọta na igba egbe egwuregwu ahụ abụghị otu ihe ahụ dị ka nkedo na console mbụ - na okwu ndị ọzọ, nsogbu agaghị ekwe omume n'ihi atụmatụ nke ngwa ahụ. Tụkwasị na nke a, Xenia ka bụ ọrụ na-emepe emepe, pasent nke egwuregwu ndị na-adọrọ mmasị dị ntakịrị. Ọ bụrụ na a na-ahapụ egwuregwu ahụ na PlayStation 3, anyị na-akwado iji emulator nke console a - ndepụta nnweta ya dị ntakịrị, ngwa a na-arụ ọrụ n'okpuru Windows 7.
Gụkwuo: PS3 emulator na PC
Egwuregwu ahụ na-arụ ọrụ, ma ọ gaghị ekwe omume ịchekwa
Lee, ebe anyị na-eche ụdị nke Xbox 360 n'onwe ya - akụkụ dị mkpa nke egwuregwu ndị na-eme ọganihu na akaụntụ Xbox Live, ọ bụghị n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ kaadị nchekwa. Ndị mmepe nke usoro ihe a enweghi ike ịgafe atụmatụ a, n'ihi ya ọ bụ naanị ka echere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, Xbox 360 emulator maka PC dị, mana usoro ịme egwuregwu na-adịchaghị mma, ọtụtụ ndị dịka Fable 2 ma ọ bụ The Lost Odyssey agaghị egwu.